दुर्घटनामा घाइते भएका डा. दीपक खरेलको निधन – Sandesh Press
दुर्घटनामा घाइते भएका डा. दीपक खरेलको बिहिबार निधन भएको छ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको आइसीयूमा उपचाररत डा. खरेलको बिहान ८ बजे निधन भएको निर्देशक डा. प्रमोद जोशीले बताए।
‘ ८ बजेर १२ मिनेटको उहाँको मुटु चल्न छोड्यो,’ डा. जोशीले भने, ‘ हामीले इजिसी, पल्स हेर्यौ। केही पनि चलेको थिएन।’
डा. खरेल कार्तिक २१ गते सडक दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका थिए।
टाउको र घाँटीमा चोट लागेका उनको बुटवलको एक अस्पतालमा लगिएको थियो। तर त्यहाँ उपचार संभव नभएपछि काठमाडौंको काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण उनलाई ट्रमा सेन्टर भर्ना गरिएको थियो।
उनको सबै उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने जनाएको थियो। उनको टाउको चोट लागेका कारण रगत जमेको थियो।उनलाई न्यूरो सर्जन डा राजीव झा नेतृत्वको टोलीले उपचार गरिरहेको थियो।
डा .खरेल कपिलवस्तु सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत थिए।विराटनगर । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका मेयरले वडा अध्यक्षलाई बैठक कक्षबाट निकालेका छन् । सोमबार वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा मेयर दिलिप कुमार राईले पथरीशनिश्चरे-४ का वडा अध्यक्ष गोबिन्दबहादुर भण्डारीलाई नगरप्रहरी लगाएर निकालेका हुन् । समीक्षा गोष्ठीमा वडा अध्यक्ष भण्डारीले पालिकामा ब्यापक आर्थिक अनियमितता भएको जवाफ मागेका थिए ।
उनले इन्धनका लागि छुट्याएको ४२ लाख, सवारी मर्मतका लागि छुट्याएको ३० लाख र फर्निचरका लागि छुट्याएको ५० लाखको हिसाब देखाएर मात्रै बैठक अघि बढाउन माग गरे । बैठक अघि बढ्न नदिएपछि मेयर राईले नगरप्रहरीलाई बाहिर निकाल्न निर्देशन दिए । निर्देशनपछि दुईजना नगरप्रहरीले उनलाई निकालेपछि मात्रै छलफल सुरु भएको थियो ।
‘पालिका भित्र अनियमितता भयो, हिसाब देखाउल भन्दा नगरप्रहरी लगाएर मलाई निकाले,’ भण्डारीले भने, ‘नगरप्रहरीले हा’तपात पनि गरे।’ मेयर र नगरप्रहरीले आफूमाथि अ’भद्र व्यवहार गरेको भन्दै उनले इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीमा उजुरी पनि दिएका छन् । वडा अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार अनियमितताका कारण यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र एक जना इन्जिनियरले अख्तियारमा मु’द्दा खेपिरहेका छन् । पालिकामा अझै अनियमितता भइरहेको उनको गुनासो छ ।
सोमबारको समीक्षा गोष्ठीमा वडा अध्यक्षलाई निकालेपछि नगर प्रमुख राईले कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेलले बैठक चल्न नदिएपछि मेयरले वडा अध्यक्षलाई बाहिर पठाएको बताए । उनका अनु सार वडा अध्यक्षको मोटरसाइकल मर्मतको बिल पास नभएका कारण विवाद निस्किएको थियो । ‘उहाँको मोटरसाइकल मर्मतको बिल १० हजारको थियो, मैले तोक आदेश दिएँ तर माग फारम नभरेकाले लेखाले रोकेको रहेछ,’ उनले भने, ‘बैठकमा इन्धन मर्म तको हिसाब खोज्नु भयो ।’
पालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि इन्धनमा छुट्याएको ४२ लाख, मर्मतको ३० लाख र फर्निचरको ५० लाख खर्च हुने क्रममा रहेको दाबी उनले गरे । मेयर राईले बैठक चल्न नदिएपछि बाहिर बसेर सहयोग गर्न आग्रह गरिएको बताउँ छन् । आफ्ना कुरा राखि सकेपछि अरुलाई कुरा राख्न नदिएपछि बाहिर पठाइएको उनले बताए। ‘बैठकबाट निकालेको होइन, बाहिर बसेर सहयोग गरिदिनुहोस् भनेको हो,’ उनले भने, ‘बहिर पनि कराउनु भएछ।’ मेयर राई नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । वडा अध्यक्ष भण्डारी भने माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । बैठक कक्षबाट वडा अध्यक्ष निकालिएपछि माओवादी केन्द्र मोरङका संयोजक गणेश उप्रेतीले आप’त्ती जनाएका छन्
Prevदयामाया लाग्छ भने अन्तिम पटक फोटो छोएर #RIP लेख्नुहोस् ।
Nextबलिउड अभिनेत्री प्रिती जिन्टा ४६ वर्षको उमेरमा जुम्ल्याहा सन्तानकी आमा बनिन्: नाम पनि गरिन् सार्वजनिक